Hiran State - News: Dowlada Kenya oo duqeyn ba'an ka geysatay Tuulada Kudhaa.
Dowlada Kenya oo duqeyn ba'an ka geysatay Tuulada Kudhaa.
HS:-Wararka ka imaanaya Tuulada Kudhaa ee gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in Xalay halkaas ay duqayn ka gaysteen Diyaaradaha dagaalka ee Ciidamada Kenya kadib war bixin ay dowlada Kenya heshay taasi oo sheegeysa in xerooyin waaweyn ay ku yaalaan tuulada Kudhaa oo ay sida la rumeysan yahay ku sugan yahiin Ajaaniib badan.
Diyaaradahani ayaa la sheegay in ay duqaynta u gaysteen saldhig milatari oo ay leeyihiin Ciidamada shabaab iyo Al qacida, waxaana halkaas ka soo baxaya Warar kala duwan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada ka soo jeeda Jubooyinka kana tirsan mamulka Azania oo ku sugan halkaasi ayaa saxaafada u sheegay in Weerarka uu dhacay xalayfiidkii amaba ka hor xiliga salaada cishaha.
Dad ku sugan Tuulada Kudhaa ayaa sheegay in ay maleeshiyada Ajaaniibta u badan ay diideen inay dadku ka ag-dhowaadaan goobta duqeynta lala beegsaday amaba magaalada Kudhaa ay shacabku ka baxaan. duqeyntani ayaa noqoneysa amaba ka mid ah duqeymo ay horey gobolada Jubooyinka ugu geysteen dowladaha Mareykanka, Faransiiska iyo Kenya oo hada kusoo biirtay dagaalka kadib marki falal qal qal galinaya shacbakooda lag afuliyey gudaha wadankooda.
Dhinaca kale ciidamdii isku dhafka ahaa ee Kenyatiga iyo kuwa deegaanka amaba ciidamdii ka soo jeeday Jubooyinka ayaa ku sii siqaya magaalada Kismaayo iyadoo laga yaabo in magaalada ay ciidamadu ka soo galaan dhinaca Jubada dhexe maadama wararka qaarkood sheegayan in laga yaabo dhinaca hawada iyadoo la isticmalayo in ciidamo lagu daadiyo inta u dhaxeysa Magaalada Jamaame iyo Kismaayo oo aan isku jirin wax badan.
Wararka laga helayo dowlada Kenya ayaa sheegaya iney gaari doonaan ilaa caasimada Jubada dhexe ee Bu'aale halka Amisom oo hada iyaduna dooneysa dhul balaarsi iskeed ah ay dooneyso iney gaarto magaalo xeebeedka Baraawe ilaa degmada Daafeed halka ciidamo u habeysan qaab beeleed loo dirayo dhinacaas iyo degmada Balcad.
Kooxda Shabaab ayaa hada ku jirta waqtigii ugu murugada badneyd maadama ay lumiyeen goobo badan oo ay horey ugu faani jireen iyadoo muraalka ciidankooda uu aad u liito kuna soo aruuray isnidaamin iyo weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ay ka wadaan Mogdisho iyo nawaaxigeeda.
Maadama aysan wadanka ka jirin dowlad rasmi ah oo warkeeda uu ka soconayo beesha caalamka dhawrka bilood ee inagu soo aadan hadii aysan wax badan iska bedelin dhaqanada TFGda waxey Somaliya noqon doontaa wadan ay dowlado Shisheye ah meelkasta ka soo galaan oo ay ka jiraan dhawr maamul goboleed oo midkasta siyaasad ka timid dibada wato.
Sida muuqata Jubooyinka iyo Gedo waxuu si rasmi ah ugu gacan galaayaa maamulka Azania maadama hada ay bilaabeen qabiilada jubooyinka qaarkood iney la xariiraan madaxweynaha maamulkaasi Prof Gaandi oo sida lagu soo waramayo xukumadiisa soo dhisaya marka la qabto magaalada Kismaayo oo ay maamulka sameyaan baarlaman ay ku idil yahiin dadweynaha goboladaasi.
Wararka naga soo gaaray shacabka jubooyinka qarkood ayaa shegaya iney dadku la yaaban yahiin shaqsiyadka ka qeylinaya Mogdisho ee iyagoo qaarkood guryo aysan laheyn Mogdisho ka degan hadane arin Somaliyeed amab mida Jubooyinka ka hadlaya taasi oo aan wax badan ka bedeleyn howlaha ka socda Jubooyinka iyo Gedo. arinta kale ee muhiimadeeda leh Jubooyinka ma joogaan ciidamo ka amar qaata TFGda xaqiiqaduna waa taas ciidamda hada ka dagaalamayo Jubooyinka iyo Gedo hadaad eegto ma jirto kuwo leys dhihi karo si toos ah ayey ugu xiran yahiin TFGda marka idaacadaha Mogdisho oo laga qeyliyo maxey ka bedeleysaa dagaalada Jubooyinka iyo Gedo ka socda ee iskugu jira cir iyo dhulka?
· admin on October 30 2011 11:35:36 · 0 Comments · 1503 Reads ·
15,247,949 unique visits